विचार – Page 24 – NepalayaNews.com
आर्थिक रुपमा स्वतन्त्र नेपाल २२ आश्विन २०७२, शुक्रबार १५:३५
भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालमा पारेको प्रभाव १९ आश्विन २०७२, मंगलवार ०५:३०
बिके नेवा । भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि नेपालको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । जारी नाकाबन्दीले नेपालको तराई मधेस, राजधानी काठमाडौं उपत्यका लगायत पहाड र हिमाली क्षेत्र , पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको जनजीवन प्रभावित भएको छ । तराई मधेसमा डेढ महिनादेखि..
शब्दले शक्तिशाली पुरुष १४ आश्विन २०७२, बिहीबार १६:०५
सारीका लामा । महिलाबादी, राजनीति र कुरितीका कुरा छोडेर साधारण जिन्दगीमा आउने हो भने पुरुष भन्ने शब्द हाम्रो समाजमा धेरै शक्तिशाली छ भनेर सोचिन्छ । हामी आफू आफूमै सोच्छौ कि पुरुष कति बलवान हुन्छन्, जे चाहन्छन त्यही गर्न सक्ने क्षमता भएका हुन्छन । तर वास्तविक..
जनताको विचको सद्भाव कायम राखौं, देश र जनताको हित विरोधी गद्दारहरुको भण्डाफोर गरौँ !! ७ आश्विन २०७२, बिहीबार ०४:१४
राधाकृष्ण देउजा नेपालका मधेसी जनतालाइ भ्रमित पारेर उनीहरुको अधिकारको निम्ति आन्दोलन गर्ने भन्दै आफ्नो व्यक्तिगत वा समुहगत स्वार्थ, अनि आफ्ना मालिकको स्वार्थ पूर्ति गराउन, दत्तचित्त भएर लागेका कथित मधेशी नेताहरुको वैठकले मधेशी जनतालाइ दुख दिंदै आन्दोलित..
—चिठ्ठी— ५ आश्विन २०७२, मंगलवार १६:३२
पूनम काफले । मन्त्रीज्यू, तपाईको देश भक्तिले ओत प्रोत छवि प्रति आभार व्यक्त गर्दछु्र । तपाईमा उदय भएको यो भावना देशको लागि नितान्त खाँचो छ्र तर एक बानले भतेर चल्दैन, सबै तर्क प्रिय बन्दैन । तपाईले परदेशिएका नेपालीलाई आफ्नो देशको माया हुँदैन भनेर कसरी भन्नु भयो?..
नेपालमा संघियता , गलाको पासो बन्यो २९ भाद्र २०७२, मंगलवार १७:१६
पवनकुमारी श्रेष्ठ (न्युयोर्क) आज नेपाल अत्यन्तै कठिन एवं कष्टकर मोडहरूबाट गुज्रिरहेको छ । नयाँ संविधान जारी गर्ने समय नजिकिँदै जाँदा पुरै देश संघियता र जातीय राज्यको सिमांकनको आन्दोलनमा होमिएको छ । जातिय पहिचान सहित राज्य सिमांकनको आन्दोलन चर्कदै जाँदा थारू..
अभिनेता हरिबहादुर थापालाई फर्केर हेर्दा २२ भाद्र २०७२, मंगलवार १६:०४
--बिष्णु सिंह-- हरिबहादुर अनेकन ब्यक्तीका नाम छ्न । त्यसैले हरिबहादुर भन्दा को हरिबहादुर भनि सोध्नु होला । तर मैले तपाइलाई "मालति-मङ्ले", "फर्केर हेर्दा", "शकुन्तला", "सहनशिल शुशिला", "पहाड चिच्याईरहेछ्", "भक्त भानुभक्त्", "पृथिवी नारायण शाह", "अमर सिंह"जस्ता केहि..
विन्ती छ डाक्साप !! २२ भाद्र २०७२, मंगलवार १५:५०
छिरिङ तोप्के लामा , मुलुकमा संविधानको टुंगो लगभग अन्तिमतिर पुगिरहेको बेला एकपटक देश पुनश्च धर्मको समुद्री छालले जुरुक्कै उठाएको छ । ‘धर्म’ बगरको बालुवा जस्तै हो, बालुवालाई मुठ्ठीमा जोडले समात्न खोजे सबै फुस्केर भुइँमा झर्छ, धेरै हल्कासँग अञ्जुलीमा राख्दा पनि..
एफ१ र बि२ जस्ता ननईमिग्रेण्ट भिषा के हुन्छन टिपियस लिएमा? १९ भाद्र २०७२, शनिबार १७:३९
विनोद रोका, एर्टनी एट ल, न्युयोर्क, ३ सेप्टेम्बवर २०१५ का दिन अमेरीकी अद्यागमन बिभागले एफ१,बि२ र एच१बि जस्ता ननईमिग्रेण्ट भिषा के हुन्छन टिपियस लिएमा? भन्ने बिषलाई लिएर बिज्ञप्ती प्रकाशित गरेको छ। यो सुचनाले टिपियस लिएपछि एफ१,बि२ जस्ता ननईमिग्रेण्ट भिषाको अबस्था..
नेपाली फिल्ममा हिन्दी फिल्मको नक्कल २२ श्रावण २०७२, शुक्रबार ०५:३९
मनोहरि पौडेल । ठूलो पर्दाका चलचित्र वा सानो पर्दाका चलचित्र सूचनामूलक, शिक्षामूलक, ज्ञानबद्र्धक मनोरञ्जनपूर्ण र अभिप्रेरणा जगाउने खालका चलचित्र हेर्न मनपराउने अधिकांश दर्शकहरुले बताउदै आएका छन् । हुन पनि हो केही समयका लागि भए पनि तनाव र चिन्ताबाट मुक्त रहनका..
अमेरिकाका चर्चहरुमा सय भन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाइने २२ आश्विन २०७२, शुक्रबार १५:३५
नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम सम्पन्न। २२ आश्विन २०७२, शुक्रबार १५:३५
एनआरएनले बालबालिकालाई नैतिक शिक्षा पुस्तक तयार पार्दै २२ आश्विन २०७२, शुक्रबार १५:३५